DF Oo Daawaneysa Dagaal Daba Dheeraaday
Dagaalka Deefow waa isku dhac beeleed salka ku haya degaan iyo qabiil oo soo noqnoqday muddo sanad ka badanna soo socday iyadoo wixii dadaal ahaa ee loo galay ay mira dhali waayeen, waxaana nasiib darro ah in mar kale uu saaka dagaalkaasi dib u soo cusboonaaday oo qasaare kale degaankaasi ka dhacay markii beeshii hore loo saaray ay soo rogaal celisay oo ay dib u qabsatay degaankaasi.
Tallaabada dowladda hore uga qaaday dagaanka DEEFOW ma ahayn mid ku filan in xal laga gaaro dagaakaasi oo hadda u sii xuub siinaya mid weyn oo faraha looga gubto iyadoo gudaha Itoobiya abaabulku gaaray, ciidanka lasoo ururiyay iyo hubka ay wataanna u muuqdo mid aan ku ekaan doonin tuuladaasi ee Gobolka Hiiraan oo dhan uu saameyn doono.
Loogama baran in ciidamada AMISOM ay dagaalada noocan ahi wax ka qabtaan, waxaana tusaale kugu filan dagaaladii Sh/Hoose iyo Guriceel, waxaase looga fadhiyaa dowladda Muqdisho fadhida inay arrintan wax ka qabato, taasoo aan ahayn baaq iyo wafdiyo macne la’aan aan B/weyne dhaafin.
Tallaabadii wasiirka Gaashaandhigga dowladda Federaalka C/qaadir Sheekh Cali Diini ku tegay degmada Guriceel waxay ahaa fursad wanaagsan iyo dadaal loo galay in lagu qaboojiyo colaadii Guriceel iyadoo heshiis kmg ah oo ilaa iminka jira uu halkaasi ka dhaqan galay. Sidaas darteed dowladda federaalka waxaa la gudboon haddii ay daacad ka tahay wax ka qabashada dagaalada Deefow inay dirto wasiiro iyo wafdi culus oo degaankaasi wax ka bedel ku sameeya ama halkaasi la dejiyo ciidamo dhexdhexaad ah oo labada dhinac ka madax bannaan, kadibna la bilaabo waanwaan iyo heshiis dhab ah oo dadkaas wallaalaha ah lagu kala badbaadiyo.
Waajibaadka koowaad wuxuu ku dhacayaa wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga oo xaq loogu leeyahay inay colaadaasi ku baxaan, isla markaana aanay ku ekaan baaq afka ah, waxaan sugnaa waa tallaabo laga qaado dagaalka Deefow ee daba dheeraday, dowladuna ka baxdo daawashada dhiigga daadanaya.
Xog: Qoraa & safiir ugu cadcad dadka u sharraxan xilka gobolka BANAADIR
Iyadoo ay sii kordhayaan hadal heynta ku saabsan xil ka qaadista Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayay soo baxayaan musharixiin jagadaasi u sharxan oo qaarkood ay ugu cadcad yihiin in xilkan loo magacaabo sida laga helayo Madaxtooyada Villa Somalia oo muddooyinkii danbe laga wado olole ka dhan ah guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
C/casiis Cali Ibrahim “Xildhiban” oo ka mida qorayaasha degan dalka Ingiriiska laakiin muddooyinkan danbe ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa ka mida musharixiiinta ugu cadcad ee xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, kadib markii uu taageero ka helay madaxtooyada. Qoraagan waxay madaxtooyada dejisay Hotel iyadoo qarashka ka bixineysa, waxaana taageero weyn uu ka heystaa mid ka mida marwooyinka madaxweynaha.
Maxamed Cali Nuur oo ah Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, waxaa marar badan loo saadaaliyay xilkan, haddana wuxuu ku jiraa liiska dadka ugu cadcad xilkaasi haddiiba ay dhacdo in xilka laga qaado Xasan Muungaab oo hadda yaqiinsaday inuu ku socdo jidkii uu maray saaxiibkii ka horeeyay ee Tarsan oo muddo sanad ka badan la hadal hayay in xilka laga qaadayo.
Safiir Cali Ameerika ayaan wax taageero ah oo xoog leh ka heysan madaxtooyada laakin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marar dhowr ah ku daray liiska ugu danbeeya ee kala xulashada.
Waxaa jira xubno kale oo iyana la hadal hayo inay ka mid yihiin musharixiinta laakiin ma aha kuwo caga badan ku taagan ama taageero ka heysta dhinacyada saameynta ku leh madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnahaas waxaa ka mida Yuusuf Jimcaale iyo C/raxmaan Yariisow.
Dhinaca kale Guddoomiye Muungaab ayaa si carro leh uga jawaabay wararka suuqa ku jira ee ah in xilka laga qaadayo, wuxuuna isagoo ka hadlayay shir ka dhacay degmada Shibis uu sheegay in xersiga kursigiisa uu xiran yahay, dadka sheegaya in xilka laga qaadanaya wuxuu ku tilmaamay inay yihiin “DAWACO”
“Xasan Sheikh ma maamuli karo dhowr qof oo hal qol la isugu geeyay xittaa”
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee UCID, Faysal Cali Waraabe, oo ka hadlaayay arrimo dhowr ah ayaa sheegay in Siyaasada Somalia ay faraha kasii baxeyso tan iyo markii la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa uu sheegay in Somalia ay soo martay wakhtiyo isugu jira aftiin iyo mugdi, balse Madaxweynaha iminka haya talada dalka uu yahay mid ka caagan Siyaasada lagu kobcin lahaa Hanaanka dalka Somalia.
Xasan Sheekh ayuu ku sifeeyay Madaxweyne Jahwareer kala kulmay Mas’uuliyiintii la daadihin laheyd Siyaasada, waxa uuna carabka ku dhuftay in aragti ahaan Madaxweyne Xasan uusan maamuli karin dhowr qof oo hal qol leysugu geeyay.
“Adeer Somalia wakhtigeeda ayay horay usoo qaadatay ma filaayo in Xasan Sheekh wakhtiga u harsan uu dhibaatada ka samata bixin karo dalka Somalia, waayo waxa uusan maamuli karin tiro dad ah oo leysugu geeyay hal qol”.
Guddoomiyuhu waxa uu meesha ka saaray in Madaxweyne Xasan uu Taariikh lagu xasuusto uga tagi karo Somalia, waxa uuna ku nuux-nuuxsaday in dalka Somalia uu alle un u maqan yahay.
Waxa uu sheegay in tusaalaha ugu dhow uu usoo qaadan karo ka weecashada qodobada kasoo baxay kulamadii dhowrka ahaa ee dhexmaray DF iyo Mamaulka Somaliland,isagoona amaan u soo jeediyay Madaxweynihii hore ee Somalia Sheikh Shariif Sheekh Axmed oo dhabar adeeg muujiyay inta uu xilka hayay.
ETHIOPIA oo DHAQAALE ku bixineysa arrin halis ku ah DF Soomaaliya (XOG)
Iyadoo Dowlada Ethiopia ay Siyaasada Somalia u adeegsaneyso Hogaanka Ahlu sunna Wal-Jameeca, ayaa waxaa hadana soo ifbaxaayo warar hoose oo sheegaya in Ethiopia ay ku howlan tahay Siyaasado lid ku ah awooda DF Somalia.
Ilo wareedyo ka tirsan Hogaanka Ahlu sunna ayaa inoo xaqiijiyay in Dowlada Ethiopia ay Ciidamo gaar ah u tababareyso garabyo ka mid ah kooxda Ahlu Sunna, ayna sidoo kale hub badan u ballan qaaday.
Ciidamadaani ayaa la tilmaamayaa in Dowlada Ethiopia ay u adeegsan doonto danaheeda gaarka ah, waxaana jiro warar hoose oo sheegaya in dhaqaalaha iyo taabagalinta Ciidamadaasi ay dusha saaratay Ethiopia.
Ciidamadaani oo kor u dhaafaya ilaa 500 ayaa laga soo uruuriyay Deegaanada ay ka arimiyaan Ahlu sunna.
Arrintaani ayaa imaaneysa, iyadoo uu dagaal ka dhex taagan yahay Ciidamo kala taageersan DF Somalia iyo Ahlu sunna Wal-jameeca, waxa ayna tani sii horseedi doonta dhibaatooyin hor leh oo dhexmara Dowlada iyo Hogaanka Ahlu sunna.
Sawirro: Xasan Sheikh oo Muqdisho ka tagay, kadibna lagu soo dhoweeyey…
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo ayaa gaarey magaalada Sharm El-Sheikh ee dalka Masar halkaas oo uu kaga qeybgalayo shir madaxeed looga hadli doono horumarinta dhaqaalaha Masar.
Xog muhiim ah oo laga bixiyey qalad 2 nooc ah oo ku jita dastuurka SOMALIA
Guddoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Caasho Geelle oo waraysi gaar ah siisey idaacadda Goobjoog ayaa sheegtey in hawshii gudiga qeybtii koowaad ay dhamaatay, hadana loo galayo qeybtii labaad.
“Arrinta dastuurka waad ogtahay dib u eegis baa lagu samaynayaa, dib u eegista lagu samaynayana ma ahan mid sahlan, waa mid u baahan sidii bulshada Soomaaliyeed looga dhaadhicin lahaa, Qorshe ayuuna u baahanyahay” ayay tiri Caasho oo intaasi ku dartay “Intii uu gudiga jireyna waxaa laga shaqeynayay sidii arrimahaasi loo fariisiin lahaa, laakiin isbadalka dhacay saameyn badan ayuu ku yeeshey shaqada gudiga, sida khilaafkii dhacay iyo wasaaradihii la kala badalay”.
Waxa ay sheegtey in wajiga koowaad ee hawsha ay ahayd sidii look ala shaandheyn lahaa ciladaha uu leeyahay dastuurka qabyo qoraalka ah, ayna usoo baxday labo ciladood kala ah mid Farsamo iyo mid go’aan siyaasi in laga qaato u baahan.
“Qaladaadka dastuurka ku jira waa labo, mid waa Farsamo, waana 85% dastuurka inta u baahan cilad bixinta farsamo, waana la saxayaa waana qodobada ugu badan, qeybna waa 15% boqolkiiba waa go’aan siyaasi ah, taasi oo micnaheedu yahay arrin naga baxsan, balse aan fududeynayo, sida qeybsiga kheyraadka dalka” ayay Tiri Caasho oo sheegtey in arrimaha ku saabsan xilka Ra’isulwasaaraha, xuduudaha, kheyraadka iyo caasimadda ay yihiin kuwa loo baahanyahay in go’aan siyaasi ah laga gaaro.
Arrimaha farsamada ah ayay ku sheegtey in ay yihiin qodobo iska hor imanaya, weedho qaldan iyo kalmado is burinaya, kuwaasi oo farsamo ahaan loo saxayo.
Mar ay ka hadlaysey caqabadaha hor istaagi kara shaqada gudiga ayay sheegtey in uu yahay dhaqaale, kaasina ay tahay in ay dowladda bixiso oo aanan laga raadin beesha caalamka “Dhaqaale ayaa jira, dhaqaalahana anaga lafteena ma rabno in dawarsi kaliya uu noqdo, oo hey’ad kaliya oo iyada lafteeda xanibaadaheena iyo shuruudaheeda badanyahay iyo shidadeeda uu dastuurka ku xirmo, waxaa loo baahanyahay in dowladda ay dhaqaalaheeda galiso, in lahaanshiyaha ay yeelato, in aysan noqon in inta mashruuc la qoro, mashruucaasi lacag loo raadiyo, kaasina uu waqti qaato”.
Caasho Geelle ayaa dhanka kale waxa ay sheegtey in wadashaqayn laga rabo gudiga dastuurka ee baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha federaalka iyo dastuurka qaabilsan, sidaasina hawsha ku fududaan karto.
Saraakiisha oo soo bandhigay 3 ka mid ah meydadka raggii weeraray Madaxtooyada Baydhabo
Saraakiisha Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed iyo Amisom, ayaa waxay soo bandhigeen meydadka saddex ka mid ah raggii Shabaabka ka tirsanaa, ee maanta weeraray Madaxtooyada Magaalada Baydhabo.
Ragga soo weeraray Madaxtooyada, ayaa watay labiska Ciidanka Militariga Somaliya, taa oo meesha ka saartay in looga shakiyo mintidiinta Ururka Al Shabaab.
Wasiirka Wasaaradda Amniga ee Maamulka Koonfur Galbeed C/fataax Maxamed Ibraahim (Geesey), ayaa sheegay in raggaasi ay soo xirteen dareyska Ciidanka Militariga Somaliya.
Xoogaga Shabaab, ayaa qorshahoodu ahaa inay gudaha u galaan Madaxtooyada Baydhabo, ha yeeshee waxaa ka hor joogsaday Ciidamada Militariga ee Ilaalada Madaxtooyada iyo Xoogaga Midowga Afrika ee Amisom.
C/fataax Geesey, ayaa ku waramaya in weerarkaasi lagu dilay Shabaabkii weerarka soo qaaday, iyadoo tiro kalana sida uu sheegay gacanta lagu dhigay, lana baarayo.
Qoraal ay soo saartay Al Shabaab oo baahiyay Idaacada Andalus, ayaa lagu sheegay tiradii loogu talla galay in ku dhimato weerarkaasi ay ku dhimatay, halka tiradii kalana ay ka baxsadeen aaggaasi, ka dib weerarka Madaxtooyada.
Ilo wareedyo madax bannaan, ayaa xaqiijinaya inay baxsadeen ugu yaraan saddex ka mid ah Shabaabkii weeraray Madaxtooyada Maamulka Koonfur Galbeed.
Dhanka kale Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo bartilmaameydku uu ahaa, ayaa goor dambe laga kaxeeyay Madaxtooyada, iyadoona la geeyay Garoonka Baydhabo.
Wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Somaliya Amb. Nicholas Kay, ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Madaxtooyada Baydhabo la fashiliyay, isla-markaana uu wanaagsan yahay Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Amb. Kay, ayaa weerarkaasi ku timaamay mid qayb ka ah xasilooni darada ay Shabaabku ka wadaan dalka Somaliya, iyagoo ka soo horjeedo xasiloonida iyo horumarka Somaliya.
Si kasta ha-ahaatee weerarkan, ayaa waxaa ku dhimatay ugu yaraan 8 ruux, oo dhinacyadii uu iska horimaadku dhex maray ah, halka laba ruux oo shacab ahna ay ku dhaawacantay.
Saddex askari oo Hay’adda Nabad Suggida ka tirsan oo kaxeeyay gaari walxaha qarxa lagu soo xiray oo la qabtay, ayaa kula qarxay, xilli ay magaalada ka saarayen.
Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Baay Korneyl Mahad C/raxmaan Aadan, ayaa xaqiijiyay geerida saddexda askari.
Al Shabaab oo sheegtay inay baxsadeen qaar ka mid ah Xoogagii weeraray Madaxtooyada Magaalada Baydhabo
Ururka Al Shabaab, ayaa si rasmi ah u sheegtay masuuliyadda weerarkii qorsheysnaa ee maanta lagu qaaday Madaxtooyada Magaalada Baydhabo, inkastoo weerarkaasi ay fashiliyeen Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed iyo Amisom.
Dagaal-yahanada Shabaabka, ayaa barqanimadii damcay inay gudaha u galaan Madaxtooyada, xilli uu ku sugnaa Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyadoo ay jilbaha dhulka u dhigteen Xoogaga Koonfur Galbeed iyo Amisom.
Qoraal ay soo saartay Al Shabaab, lagana baahiyay Idaacada Andalus, ayaa waxaa lagu sheegay in Xoogaga Al Shabaab ay fuliyeen weerar loogu talla galay in lagu qaado Madaxtooyada Magaalada Baydhabo.
Qoraalka waxaa lagu sheegay tiradii loogu talla galay inay ku dhimato weerarkaasi inay ku dhimatay, halka tiradii kalana ay ka baxsadeen aaggaasi, ka dib weerarka Madaxtooyada.
Andalus, ayaa tebisay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan toddobo ka mid ah Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed iyo Amisom, suurta galna ay tahay in khasaaruhu uu intaa ka bato.
Wasiirka Wasaaradda Amniga ee Maamulka Koonfur Galbeed C/fataax Maxamed Ibraahim (Geesey), oo la hadlay BBC, ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu dilay laba ka mid ah Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada.
C/fataax Geesey, ayaa ku waramaya in weerarkaasi lagu dilay Shabaabkii weerarka soo qaaday, iyadoo tiro kalana sida uu sheegay gacanta lagu dhigay. Wuxuuse meesha ka saaray in wax Shabaab ah baxsadeen.
Warbixin: Ciidanka Ethiopia oo xasuuqay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed
Wararka ka imaanaya Magaalada Baydhaba ayaa sheegaya in inta uu socday Dagaalka ay Maleeshiyada Alshabaab ku qaaday Madaxtooyada Maamulka Koofur Galbeed ee Somalia ayaa waxa ay Ciidamada Ethiopia xasuuqen qaar kamid ahaa Ciidamada Maamulka.
Wararku waxa ay sheegayaan in Ciidamada Ethiopia ay dagaalkaasi ka qaaden Jahwareer, waxa ayna rasaas ooda uga qaaden Ciidamadii Maamulka ee ilaalada ka ahaa Madaxtooyada, kadib markii Ciidamada iyo kuwii weerarka soo qaaday ay ahaayen isku darees.
Inta badan Madaxtooyada Maamulka ayaa waxaa ilaalo ka ah Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Ethiopia, waxa ayna jahwareer kadib rasaaseyen Ciidamadii gurmadka u ahaa iyo kuwa ilaalada Xarunta.
Sidoo kale Warar madax banaan ayaa sheegaya in uu jiro Khasaaro soo gaaray Ciidamada AMISOM ee Ilaaliya Amaanka Madaxtooyada inkastoo aan tiradooda weli la sheegin.
Al-shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyada Weerarka lagu qaaday Madaxtooyada Baydhabo,iyagoona sheegay in ay Weerarka ku dileen ilaa 7 Ruux oo iskugu jira Saraakiil iyo Ciidamo.
Ra’iisal Wasaare Cumar oo la kulmay Gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Jabuuti
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo maanta booqday Xarunta cusub ee Baarlamanka Djibouti, ayaa kula kulmay Gudoomiyaha cusub ee Baarlamanka Djibouti Maxamed Cali Xumad iyo qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamanka, isagoo kala hadlay xiriirka labada dawladood ee walaalaha ah iyo gaar ahaan wada shaqaynta xoogan, ee ka dhaxaysa labada Baarlamaan ee Somaliya iyo Djibouti.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, ayaa ugu hambalyeeyay Gudoomiyaha cusub ee dalka Djibouti,Mudane Maxamed Cali Xumad xilka loo magacaabay. Ra’iisal Wasaaraha, ayaa markale ku celiyay in uu uga tacsiyaynayo Dawladda iyo Shacabka Djibouti geeridii ku timid Allaha u naxariistee marxuum Idriss Arnaoud Ali, Gudoomiyihii hore ee Baarlamanka Wadanka Djibouti.
Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid waxaa uu yiri: “Farxad ayay ii tahay maanta in aan soo booqdo dhismaha cusub ee Baarlamanka Djibouti ee aan walaalaha nahay.”
Waxa kaloo uu yiri “Waxaa jira guddiyo Baarlamaan oo ka tirsan labada dal, kuwaasi oo si xoogan uga shaqeeya in wada-shaqayn buuxda ay yeeshaan mudanayaasha baarlamanka isla markaana ay is-dhaafsadaan aqoonta iyo khibrado loogu adeegayo shacabka labada dal.”
Wuxuu sii raaciyay “Waxaan uga mahadcelinayaa Baarlamanka iyo Shacabka Djibouti taageerada ciidan ee ay u fidiyeen dalka Soomaaliya. Dawladda iyo Shacabka Djibouti waxaa mar walba ay la garab taagnaayeen Soomaaliya taageero hiil iyo hooba leh tan iyo shirkii dib-u-heshiisiinta carta ee dawladda Djibouti ay martigalisay, waana sii xoojin doonnaa xiriirka iyo iskaashiyada u dhaxeeya labada dal.”
Madaxweyne Xasan oo Magaalada Muqdisho ka furay Shirkadda Caymiska ee Takaful
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta daah furey Shirkadda Caymiska ee Takaful Afrika, laanteeda Soomaaliya.
Madaxweynaha, ayaa ugu horeyn hambalyo u direy ganacsatada iyo mas’uuliyintii suuragelisey in shirkaddan ay ka hawlgasho Soomaaliya.
“Waa markii ugu horeysey ee muddo 25 ah kadib shirkad baaxaddan leh oo dhinaca caymiska ay ka hawlgasho Soomaaliya, hambalyo ayaana idin leeyahay, waxaana idin ku boorinayaa inady adeeggiina ku baahisaan Soomaaliya oo dhan, dhab ahaantiina talaabada aad qaadeen waa mid ku dayasho mudan.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweynaha, ayaa sidoo kale ugu baaqey shacabka inay ka faa’ideystaan adeegyada nocaan oo kale ah oo wax ka taraya db u dhiska iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, iyadoo weliba shirkaddan ay hawlaheeda ku saleysan yihiin shareecada Islaamka.
Madaxweynayha, ayaa sidoo kale ku booriyey hay’adaha dhaqaaalaha iyo waxbarashada inay xoogga saaraan sidii loo soo saari lahaa xirfadleyaal aqoontooda sareyso oo adeegyadan caymiska iyo kuwa kale ee dhaqaalaha bulshada u fidiya.
Munaasabadan waxaa kaloo ka Hadley Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen, Guddoomiye ku Xigeenka Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Maryan Cabdullaahi Yuusuf iyo mas’uuliyiin ka tirsan Shirkada Caymiska Takaful
Beesha Ceyr oo soo saartay war kulul oo ku socda madaxweyne Xasan (Aqri)
Kulamo kala duwan maalmihii la soo dhaafay u socday Jaaliyada Beesha Cayr ee Wadamada Yurub, Maraykanka, Canada, Afrika iyo Carabta ayaa soo idlaaday.
Kulamadaan oo ahaa mid looga tashanayay aayaha Gobolka iyo Goobaha ay dagto Beesha oo Deegaan ahaan aad u balaaran, ayaa waxaa ka soo baxay Kulankaas Go’aamo kala Duwan oo loogu baaqayo Madaxweynaha dalka Soomaaliya in uu dhex dhexaad ka Noqdo xaalada Gobolka gaar ahaan deegaanada ay dagaan Beesha Cayr oo Madaxweyne Xasan dhaliilo badan looga soo Jeediyay.
War qoraal ah oo soo gaaray Bogan ayaa waxaa uu u qornaa sidaan:-
Kadib markii ay Kulamo kala Duwan yeelatay Jaaliyada Beesha Cayr ee ku Nool caalamka ayaa waxaa Madaxweyne Xasan loogu soo Jeediyay dhaliilo aad u waawayn Kuwaas oo ay ka mid tahay, in uusan Madaxweynaha Doorkii Madaxweynanimo ka qaadan dagaalka ka socda Guriceel, Mudo ku dhaw Bil, sida ay hadalka u dhigeen Jaaliyadaha Beesha cayr ee soo saartay Qoraalka.
Waxayna Beesha si cad u Qeexday in Madaxweynaha oo jooga Dhuusamareeb uusan ka hadli dagaal saacada ka hor ka dhacay Guriceel oo ay ku dhinteen ku dhawaad 30- qof, tasi oo macnaheeda Beesha ay ku Tilmaantay in Madaxweynaha uusan kala Jeclaayn dadka ku le’anaaya Dagaalka ka socda Guriceel, waxaa ka mid ah Qodobada ay Beesha ka hadashay Maamul u samaynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud halkaas oo ay Beesha ku dhaliishay Madaxweynaha in uu hagar daaminaayo hamsami u socdka Qorshaha Maamul u samaynta Gobolada dhexe.
Beesha ayaa si qoto dheer uga hadashay qaabka Madaxweynaha bilaawgii Heshiiska Maamul U samaynta Gobolda dhexe uu u Iclaamiyay Madasha shirka Maamul u samaynta Gobolada Dhexe ee Soomaaliya iyadoo uusan qiimeyn rabitaanka bulshadda degta labada gobol.
Sidoo kale Booqashadii Madaxweynaha ee Caasimadda Dhuusamareeb uu ku tagay oo ahayd mid aan horay loogu soo dhawaynin Gobolada Soomaaliya, ayuu madaxweynaha dareenkii Bulshada iyo Jacaylkii Dowlad Nimo ee dadka dagan Gobolada dhexe u muujiyay ama uu xaqiray Rabitaankii Bulshadaas, isaga oon Xitaa wax uun hadal ah ku Qancin bulshadii halkaas ku soo dhawaysay, ayuu ku soo laabtay Madaxweyne Xasan Magaalada Muqdisho, taas oo dhaawaceysa hanaanka dowladnimo ee hadda laga hirgalinaayo Soomaaliya.
Waxaa intaas ka sii daran in Madaxweynaha uu xataa awoodi waayay in uu cadeeyo caasimadda Maamulka la dhisaayo, taasi oo Dastuurka uu Qeexayo in ay tahay Dhuusamareeb, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Kulamadaan Beesha u socday oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa sidoo kale lagu taageeray Bayaankii ka soo baxay shirka Nabadaynta ee ka socda Dhuusamareeb oo odayaasha dhaqanka cadeeyeen in 25 maalin ay ku dareen mudadii uu soconayay shirka, ayaga oo ku dhaliilay Dowlada Soomaaliya in aysan siinin wax Qiimayn ah shirka ka socda halkaas iyo shacabka Dagan Gobolada Dhexe, taasi oo dastuurka uu cadeynayo in Dowladu ay ka Qeyb qaadato Dib u heshiisiinta bulshadda Soomaaliyeed.
Beesha Cayr ayaa ah Beel saamayn wayn ku Leh siyaasada Soomaaliya, isla markaana qaadatay hanaanka Dowlanimo ee wadanka ayaa dhaliishaan ay u soo Jeedisay Madaxweynaha waxay ku soo aadaysaa Xili dagaal uu ka socdo Degmada Guriceel dagaalkaas oo u dhaxeeya Ciidamada dowlada iyo ciidamada urur diimeedka Ahlusuna Waljameeca, sababayna Qasaare naf iyo maalba Leh, waxaaana gaba gabdii shirka Beeshu ugu baaqday Qeybaheeda kala Duwan ee bulshadsa Midnimo iyo in ay Xoogooda iskugu geeyaan sidii Maamul loo dhanyahay looga samayn lahaa Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Jabahad cusub oo magaalada Kismaayo ka dillaacday soo saartay war culus !!!
Jabhad cusub oo xaq u dirir ah ayaa ka dillacday magaalada Kismaayo, waxayna soo saartay warkeeedii ugu horreeyey oo sidan uqonaa:-
Magacayga waa kabtan Juma Shongolo, oo joogaa magaalada Kismaayo. Waxaana ahay hoggaamiyaha urur cusub oo la yiraahdo Gosha Liberation Front.
Dulmiga ka socda Jubooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo ee dhibka loogu geysanayo dadka reer goleedka darteed waxaan maanta si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa inaan bilowney kacdoon hubeysan oo dadkeena lagu xoreynayo oo laga bilaabo Kismaayo oo aha xarunteena ilaa dhulka kale ee Jubbooyinka oo aan degno.
Dulmiga lagu hayo reer goleed waxaa ugu dambeeyay gabar 10 jir ah oo ay kufsadeen cadowga iyo weliba dadka reer goleedka oo qasab looga saarayo magaalada Kismaayo.
Dagaalka waxan ku qaadeynaa maamulka beenta ah ee Axmed Madoobe, ciidamda Amisom, ciidamada kale ee shisheeye iyo weliba dowladda Somalia oo dhamaantood dulmi nagu haya.
Waxan u sheegeynaa hay’adaha shisheeye ee Kismaayo jooga inay dalka isaga baxaan amnigooda dartii, diyaaradaha magaalada imaanayana wan u digeynaa.
Halgankan waa mid xaq ah, waxaana balan ilaahay ku galeynaa inaan soo dhicino xoriyadda dadka reer goleedka.
Waxan qaadeynaa weeraro dhinac kasta oo aan ku qaadeyno kuwa cadowga ah oo kala ah Axmed Madoobe, dowladda Somalia, Amisom iyo hay’asha shisheeye ee dhulkeena jooga.
Kooxda Al-Shabaab wax xiriir ah ma lihin, mana jirto colaad inaga dhexeysa, balse waxaan wadaagnaa hal cadow.
Aniga ayaa wakiil ka ah reer goleed oo dhan, siyaasiyiinta been beenta ee sheegta reer goleed ee ku jira baarlamanka iyo kuwa kale ee banaanka jooga, iyaguna digniin ayaan u jeedinayaa inay arrimaheena faraha kala baxaan, waayo waxba wey qaban waayeen.
Hoggaamiyaha Gosha Liberation Front
“Dadkii xaqa u lahaa ayuu kula indha cad yahay boob aan sharci aheyn”….
Siyaasi xiriir dhow la leh Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia ayaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamed Xuseen ”Muungaab” ku eedeeyay in qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho uu kawado boob.
Siyaasi Xasan C/qaadir Muudey, ayaa sheegay in Gudoomiyuhu uu ku indha cad yahay inuu boobo dad masaakiin ah oo heysto Guryo iyo Dukumiintiyo sharci ah, waxa uuna Madaxweynaha Jamhuuriyada ugu baaqay inuu wax ka qabto arrintaani dadka jahwareerisay.
Siyaasiga oo la hadlaayay warbaahinta ayaa waxa uu yiri “Muungaab dhul boob ayuu ka wadaa deegaanka Garisbaaley ee duleedka Muqdisho. Dad buu doonayaa in awood uu kaga qaato dhul ay sifo sharci ah u lee yihiin, madaxweynaha waxaa laga rabaa in ninkaasi uu keenay uu dadka ka qabto”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri “Dadkaan waxay heystaan dokumentiyo sharci ah oo cadeynaaya inay dhulka lee yihiin, wuxuu ugu cago jugleeyay in xoog looga saari doono. Boob cusub oo hantida maguurtada ah lagu haayo weeye”
Dhanka kale, waxa uu Maamulka Gobolka Banaadir gaar ahaan kuwa ku shaqada leh dhulalka inay ka fogaadan is daba marinta ay ku hayaan hantida shacabka, wuxuuna carabaabay in xisaabtan uu ka dambeyn doono.
Wafdiga Wasiirka ayaa caawa ku hoyan doona degmada Guriceel, waxaana la filayaa in heshiisyo laga gaaro dagaaladii ka dhacay degmadaas ee u dhaxeeyay Ciidamada dowladda iyo Xoogaga Ahlusuna.